Published April 7, 2021 at 9:20 PM CDT
Dowlada Iowa Kim Reynolds ayaa maanta warbixin ka siisay talaalka gobolka. Reynolds ayaa sheegay in ilaa hada 44% ee Iowans 18 iyo wixii ka weyn ay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo ah tallaalka COVID-19. Heerku waa kudhowaad laba jibbaar kuwa 65 sano iyo ka weyn. Iowa waxay kujirtaa 9aad wadanka talaalada. Reynolds waxay tiri gobolku wuxuu qorsheynayaa inuu xooga saaro sidii loo heli lahaa talaalka kooxaha laga tirada badan yahay iyo ardayda jaamacadaha. Reynolds ayaa tiri iyada oo si weyn u taageerta tallaalada COVID-19, waxay si xoogan uga soo horjeedaa baasaboorada caddeeya in dadka laga tallaalay fayraska.
Badhasaabada kale ee Jamhuuriga ayaa iyaguna ka soo horjeestay isticmaalka baasaboorka talaalka. Govan Reynolds waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay tilaabo ka qaado iyaga iyada oo loo marayo sharci dejinta ama amarka fulinta.
Aqalka Cad ayaa horaantii toddobaadkan sheegay inuusan u baahnaan doonin baasaboorro tallaal ah. Waxayna dib ugu dhigeysaa shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay go'aan uga gaaraan haddii ay doonayaan inay u baahdaan caddeyn tallaal ah.
Dhanka kale, Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warineysaa 13 dhimasho dheeraad ah oo ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka COVID-19, iyo in kabadan 750 kiisas cusub oo leh 23 kiisas dheeri ah oo dheeraad ah Gobolka Woodbury.
Heerka waxtarka tijaabada ee gobolka oo dhan waxyar buu kordhay 24 saacadood.
Tan iyo bilowgii cudurka 5,835 ee faafa waxay u dhinteen dhibaatooyinka COVID-19 iyadoo qiyaastii 40% ay ka yimaadeen xarumaha daryeelka muddada-dheer.
Taasi waa sida laga soo xigtay Waaxda Iowa ee Badbaadada Dadweynaha warbixinteeda sanadlaha ah ee ku saabsan dhacdooyinka xoogga Waxay ogaatay…